Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaad Gilgilay Magaalada Addis Ababa.
Mudaharaad Gilgilay Magaalada Addis Ababa.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya ayaa sheegaya mudaharaad wayn oo gil gilay inta badan magaalada Addis Ababa.
Mudaharaadkan oo aad ubalaadhnaa ayaa lasheegayaa in ay dhigeen dadka shacabka ah ee kasoo jeeda qoomiyada Raya oo ah qoomiyad asalkeedu uu kasoo jeedo Axmaaro (Xabashi).
Qoomiyada Raya ayaa sheegtay in ay dulmi badan kala kulmeen maamuladii hore ee Itoobiya kuwaas oo kuqasbay in ay kamid noqdaan Gobolka Tigrey oo Af iyo dhaqan toona aysan lawadaagin, isla markaanu uu kadhaxeeyo looltan dhinaca dhulka ah.
Maamulkii wayaanaha ee uu hogaaminayay KT Zinawi ayaa siqasab ah qoomiyada Raya ugu daray Gobolka Tigrey, waxayna qoomiyadu lakulantay dhibaatooyin badan intii lagu daray Gobolka Tigrey sida ay sheegeen.
Mudaharaadayaasha qoomiyada Raya ayaa sheegay in dadkoodii maxaabiista ahaa ee maamulka Tigreega u xidhnaa ay wali xidhan yihiin halka dadkii kale ee Itoobiyaanka ahaa ay kafaa’iidaysteen cafiskii guud ee Abiye Axmed.
Waxaa magaalada Addis Ababa kusoo badanaya mudaharaadada ay shacabku dhigayaan kadib markii shacabka loo ogolaaday in ay si xor ah umudaharaadaan, taas oo keentay in amnigu uu siixumaado.